စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညှို့အားပြင်းပြင်း အလှတရားကို ပြသလိုက်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ – Askstyle
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ညှို့အားပြင်းပြင်း အလှတရားကို ပြသလိုက်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
ဘိုဆန္ဆန္ မ်က္နွာက်ေလးနဲ႔ စြဲမက္ဖြယ္ ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ပတ္ထရစ္ရွာကေတာ့ ပုရိသကိုကိုေတြရဲ႕နွလံုးသားကို အပိုင္သိမ္းထားႏိုင္တဲ့ နွင္းဆီပန္းေလးဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ပတ္ထရစ္ရွာက ညိွဳ႕အားျပင္းလြန္းတဲ့ သူမရဲ႕အမိုက္စားပံုရိပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို လူမႈကြန္ယက္မွာ ေဝမွ်ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုဖက္ရွင္နဲ႔မဆို လုိက္ဖက္ညီလြန္းတဲ့ ရွာရွာေလးကေတာ့ စြဲမက္ဖြယ္ ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔လည္း အသည္းယားဖို႔ေကာင္းေလာက္ေအာင္ မိုက္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မိုမိုေလးခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံျခားသူေလးလားလို႔ေတာင္ အထင္မွားရေလာက္ေအာင္ကို ေဂၚေနတဲ့ ပတ္ထရစ္ရွာရဲ႕ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ပတ္ထရစ္ရွာကေတာ့ “Here comes my birthday month Happy sweet December!!! ” ဆိုျပီး သူမရဲ႕ေမြးလေလးျဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာလအစေလးမွာ အရမ္းကိုမိုက္တဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခ်ို႕ကို ေဝမွ်ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ ပတ္ထရစ္ရွာကေတာ့ သူမအေပၚ နားလည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ သာယာတဲ့ အခ်စ္ေရးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာပါေနာ္။
အၾကည့္ေတြက စူးရွလြန္းတယ္ ရွာရွာရယ္…။
မင္းသမီးေခ်ာေလး ပတ္ထရစ္ရွာကေတာ့ လတ္တေလာမွာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ျဖစ္ေနၿပီး ရုပ္ရွင္ေတြလည္း ရိုက္ကူးျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိုမိုေလးခ်စ္ပရိသတ္ေတြလည္း စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အလွတရားကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ရွာရွာေလးကိုခ်စ္ရင္share သြားၾကဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။
Source:Sue Sha Naing’s Facebook
ဘိုဆန်ဆန် မျက်နှာကျလေးနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ် မင်းသမီးချောလေး ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ပုရိသကိုကိုတွေရဲ့နှလုံးသားကို အပိုင်သိမ်းထားနိုင်တဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ လတ်တလောမှာတော့ ပတ်ထရစ်ရှာက ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက်ရှင်နဲ့မဆို လိုက်ဖက်ညီလွန်းတဲ့ ရှာရှာလေးကတော့ စွဲမက်ဖွယ် ဖက်ရှင်လေးနဲ့လည်း အသည်းယားဖို့ကောင်းလောက်အောင် မိုက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် နိုင်ငံခြားသူလေးလားလို့တောင် အထင်မှားရလောက်အောင်ကို ဂေါ်နေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ “Here comes my birthday month Happy sweet December!!! ” ဆိုပြီး သူမရဲ့မွေးလလေးဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလအစလေးမှာ အရမ်းကိုမိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ သူမအပေါ် နားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ချစ်သူနဲ့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော်။
အကြည့်တွေက စူးရှလွန်းတယ် ရှာရှာရယ်…။
မင်းသမီးချောလေး ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ လတ်တလောမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ဖြစ်နေပြီး ရုပ်ရှင်တွေလည်း ရိုက်ကူးဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရှာရှာလေးကိုချစ်ရင်share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။